लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक चैत १८ मा हुने
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक चैत १८ गते बस्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सरकारको सिफारिशमा बैठक आह्वान गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलले जारी गरेको प्रेश विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम १८ गते दिउँसो १ वजे सातौँ अधिवेशन आह्वान…
काँग्रेस केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक चैत २७ गते बस्ने
काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक एक हप्तापछि बस्ने भएको छ। नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे थप छलफल गर्न अर्को बैठक चैत २७ गते शुक्रवार बस्ने निर्णय भएको बताए। हिजो शुक्रवार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको शर्माले जनाए। 'अर्को केन्द्रीय समिति बैठक चैत…
हेटौँडा : सरकारको दबाबमा सूचना टाँस गरेर सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले स्थगित गरेको वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक चैत २४ गते मंगलवारका लागि आह्वान गरिएको छ। सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै चैत २४ गते मंगलवार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको बैठक बस्ने उल्लेख गरेको छ। तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद…
बागमती प्रदेशसभा बैठक चैत अन्तिम साता
हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभा आगामी चैत अन्तिम साता बस्ने भएको छ । बैठकको मिति तय गर्न शुक्रबार बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा कार्य परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ ।बैठक दिउसो १ बजे बस्ने जनाइएको छ । बिहिबार बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र बागमती प्रदेशसभा अन्तर्गतका पाँच वटा विभिन्न समितिका सभापतिहरूको बैठकले प्रदेशस...
प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको सातौँ तथा हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठक यही चैत २३ गते सोमबार दिनको २ बजे बस्ने भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको आदेशानुसार प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यलाई सूचना जारी गरिएको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीद्वा...
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक चैत २३ मा
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक चैत २३ गतेका लागि बोलाएका छन् । यसअघि पटक-पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिँदै आएको प्रदेशसभा बैठक चैत २३ गते दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको हो ।
एमाले संसदीय दलको बैठक चैत ७ गते फेरि बस्ने
नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक चैत ७ गते फेरि बस्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत ७ गतेका लागि पूर्वनिर्धारित रहेको छ । बिहीवारको संसदीय दलको बैठकले चैत्र ७ गते फेरि बैठक बस्ने निर्णय गरेको पूर्वमन्त्री तथा सांसद शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए । बैठकले दलको विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न कार्यदल बनाएको छ भने संसदीय दलको बोर्ड समेत गठन गरेको छ ।
काठमाडौं । आज बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरी स्थगित भएको छ । आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक विभिन्न समयमा निधन भएका १४ जना पूर्व सांसदहरूको शोक प्रस्ताव पारित गर्दै अर्को बैठक चैत ३ गते बस्ने गरी स्थगित भएको हो । The post प्रतिनिधिसभा बैठक चैत ३ गतेसम्मका लागि स्थगित appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
विराटनगर-प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक सरेको छ । फागुन २० गतेलाई वोलाइएको बैठक चैत २ गते बस्नेगरी सरेको हो ।प्रदेशसभा सचिवालयले विशेष कारण देखाउँदै प्रदेशसभा बैठक चैत २ गते साढे १२ बजेका लागि सारेको हो । प्रदेश–१ को प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ । फागुन २० गतेको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल […]
बिराटनगर / प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको बस्ने भनिएको बैठक विशेष कारणले मिति परिवर्तन गरिएको छ । प्रदेशसभाको सातौँ तथा हिउँदे अधिवेशनको चौथो बैठक यही फागुन २० गते अपराह्न १ः०० बजे बस्ने घोषणा गरिएको थियो । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको आदेशानुसार सूचना जारी गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले... The post प्रदेश नं १ काे प्रदेशसभा बैठक चैत २ गते appeared first on Purbeli News.
प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठक २ चैतसम्मका लागि स्थगित भएको छ । गत ९ फागुनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध